Wararka - COVID 19 Tijaabada Degdega ah ee loo yaqaan 'Antigen Rapid' oo si ku-meel-gaar ah uga diiwaangashan Jarmalka
COVID 19 Tijaabada Degdega ah ee loo yaqaan 'Antigen Rapid' oo si ku-meel-gaar ah loogu diiwaangeliyey Jarmalka
Immunobio COVID 19 Qalabka Imtixaanka Degdegga ah ee Antigen ayaa si guul leh uga diiwaan gashan Jarmalka. Natiijooyinka imtixaanka diiwaangelinta waxay muujinayaan in alaabteennu ay leeyihiin waxqabad aad u wanaagsan oo ay macaamiisha aad u aqoonsan yihiin
Cudurka cusub ee faafa (COVID 2019) wuxuu qarxay dabayaaqadii 2019 wuxuuna qaaday China horraantii 2020. Shaqaale kasta oo ka tirsan IMMUNOBIO wuxuu ka walaacsanaa horumarka cudurka wuxuuna doonayaa inuu gacan ka geysto dagaalka ka dhanka ah cudurka ee dalka. Kooxda R&D waxay si guul leh u soo saareen xirmada tijaabada degdega ah ee COVID 2019 IgG / IgM horaantii Febraayo 2020, iyo bishii Sebtember 2020, kooxda R&D waxay si guul leh u soo saareen xirmada tijaabada baaritaanka antigen ee 2019-ncov.
Kooxdayada R&D waxay ogaadeen in baaritaanka antigen-ka 2019-ncov antigen ee suuqa noe uu yahay mid aad u fudud in la soo saaro been abuur been ah marka loo isticmaalo candhuufta candhuufta. Si looga gudbo dhibaatadan, injineeradu waxay sameeyeen tiro badan oo tijaabooyin kala duwan ah oo ku saabsan xirmada tijaabada AG ee suuqa. Iyada oo loo marayo dadaal aan kala go 'lahayn, kooxda R & d waxay aakhirkii soo saareen qalabkeena tijaabada ah ee' 2019-ncov antigen ', oo aan kaliya dacwayn karin baaritaanka suufka sanka, laakiin sidoo kale lagu dabaqi karo baaritaanka dhalada candhuufta. Waxaan sameynay kumanaan tijaabo ah tijaabada candhuufta ka hor intaanan xirmada suuqa gelin, ma jirin wax tijaabo ah oo ka maqnaansho macquul ah.
Macaamiilkeenna Jarmalka ah Mr. MXX wuxuu bartay in xirmada baaritaanka IMMUNOBIO COVID 19 Antigen loo adeegsan karo ogaanshaha candhuufta, wuxuu isla markiiba go'aansaday inuu iska diiwaangeliyo badeecadan Jarmalka oo uu iibiyo. Waxaan siinay muunad tijaabada dhareerka candhuufta ee baaritaanka diiwaangelinta, natiijooyinka diiwaangelintuna waxay muujinayaan in xasaasiyadda iyo gaar ahaanta baaritaanka antigen-ka ay aad u wanaagsan yihiin. Dareenka ogaanshaha saamiga ayaa ah 100%, gaar ahaana waa 95.6%.
Waqtigan xaadirka ah, badeecada si guul leh ayaa loo diiwaangaliyay oo lagu iibiyay Jarmalka, sidoo kale si guul leh ayaa looga diiwaangaliyay Midowga Yurub.
Waqtiga boostada: Jan-14-2021